Israely: Tanin’ny Afo sy ny Ranomandry · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Desambra 2010 5:24 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, македонски, Español, Aymara, English
[Amin'ny teny Anglisy ny rohy rehetra]
Ho an'ny maro, ireny oram-batravatra ireny dia nitondra fitonian-tsaina taorian'ny haintany niainan'ny firenena. Nitombo dimy sentimetatra ny haavon'ny Ranomasin'i Galilee, siniben-drano voalohany ho an'i Israely, vokatr'ilay oram-batravatra.
Io fihetseham-po io dia naelin'ny maro tao amin'ny tontolon'ny fandefasana twitter Israeliana. Hoy i @Tekhelet:
Faly aho fa manana oram-batravatra / orana tsotra sy ranomandry i Israely ankehitriny. Baruch HaShem. Misaotra anao, Ray o!
Na eo aza ny fahavoazana, ny fisavoritahana sy ny fanelingelenana naterany, maro ireo velom-pisaorana noho ny fiavian'ny orana. Nanampy i @MaozIsrael hoe:
Ranomandry sy orana eto #Israel! Namaly ny vavakay Andriamanitra!
Saingy tsy valim-bavaka ho an'ny tsirairay ireny oram-batravatra ireny. Na teo aza ny faniriana mafy dia mafy hirotsahan'ny orana, niteraka country-wide damage koa ilay oram-batravatra.
Ny Bilaogy Maoz Israel dia namoaka sary vitsivitsy ahitàna ny faharavàna naterak'ilay oram-batravatra:
Morontsirak'i Tel Aviv's nodabofan'ny rivo-mahery sy ny oram-baventy
Alone in Holy Land (Irery aty an-Tany Masina), Romana iray mpitoraka bilaogy monina ao Ashdod, dia namariparitra an'izany hoe tratry ny oram-batravatra teny am-pamiliana fiara ho any Eilat niaraka tamin'ny fianakaviany izany :
Tanatin'ny helo sanatria! Voalohany, niala avy tany ny rivotra, tena nahery tokoa ary avy eo ny fasika…Rehefa tonga tao Mitzpe Ramon izahay, tena nangatsiaka sy be rivotra be tao … Natahotra mafy aho. Ny tafio-drivotra mboa nitohy hatrany namely ny fiara avy ao amin'ny ilany iray, avy eo ao amin'ny ilany indray ary dia tena nisavoritaka aho. Tsy nahavita akory na dia ny nanonona teny iray aza. Toy ny haben'ny voana pitipoa ny vavoniko ary nihidy ny tendako… Tsy nampino…nandritra izay nivavaka mangina aho sy nanodina ny saiko hoe any an-toeran-kaf aho izao. Tamin'ny faran'ny dianay, 30 km eo ho eo alohan'i Eilat, nijanona tampoka ilay tafiotram-pasika, nazava ny lanitra ary niverina ny masoandro.
Ary nisy indray ireo tsy niraharaha izay rivotra tany sy naka tombony tamin'ilay toetrandro nanjakàn'ny tafiotra. Shahar Zubari, Israeliana mpikorisa ambony rano amin'ny alalan'ny herin'ny rivotra (windsurfer), dia nisedra ny toetrandro sy niatrika ny onjan-drano.